१५ जना थपिएर राष्ट्रपतिमाथि लाग्छ त महाअभियोग ? - Jana Aastha News Online Jana Aastha News Online
१५ जना थपिएर राष्ट्रपतिमाथि लाग्छ त महाअभियोग ?
प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०७८, बिहीबार १०:००
प्रसंग पुरानो भयो– सत्ताच्युत भएपछि बालकोटको बार्दलीमा उभिएर केपी ओलीले पार्टीमा माधव नेपालका लागि कुनै ठाउँ छैन भन्नुभएको । नयाँ तथ्य त के छ भने अहिले माधवविरुद्ध केपीभन्दा उग्र उहाँका केही केन्द्रीय सदस्य देखा परेका छन् ।
केपी बोलिरहँदा सँगसँगै बसिरहेका सुवास नेम्वाङ, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवालीहरुमा उत्साह थिएन । दिक्क मानेजसरी उहाँहरु बसिरहनुभएको थियो ।
#राष्ट्रियसभामा प्रमुख सचेतक